Ọ Ka Mma Nweta Ọpụpụ Kasị Elu ọzọ na 2016
site ha na 18-03-12
2016 bụ afọ owuwe ihe ubi ọzọ maka Better Motor, n'ihi nkwado nke ndị ahịa na ndị ọrụ kachasị mma 'na-arụsi ọrụ ike. Anyị na-eto eto n’iru n’afọ ọ bụla. Mbido kwa afọ na 2016 bụ nde 2.9, nhazi 450,000 mụbara ma e jiri ya tụnyere nde 2.45 na 2015. Na Afọ Ọhụrụ 2017, anyị ga-akwụsị ...
Injinia Li Dongwei si Ohio State University USA gara Shandong Better Motor Co., Ltd.
On June 8, Electric Engineering na akpaaka Engineer Li Dongwei si Ohio State University USA gara Shandong Better Motor Co., Ltd. Li Dongwei, postdoctoral nchọpụta si eletriki sayensị laabu na Ohio State University USA, onye nwere abụọ dọkịta degrees isi na electric engineerin. ..
Ndi oru ngo nke ihe omuma ihe omuma oru ihe banyere Better Motor malitere
On June 26, ngo ngo nke ọmụma usoro engineering oru ngo na Better Motor e tọrọ ntọala. Shandong Sanjiang Electric Engineering Co., Ltd na-ahụ maka ịhazi na ịrụ ọrụ a. A na-eme atụmatụ ime ọrụ ikpe na ngwụcha Sep. Ugbu a Sanjing Electric Engineeri ...